Madaxweynaha oo maanta hortagaya Xildhibaanada Golaha Shacabka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweynaha oo maanta hortagaya Xildhibaanada Golaha Shacabka
Madaxweynaha oo maanta hortagaya Xildhibaanada Golaha Shacabka
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu hortaggo Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya.
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa xalay Xildhibaanada ku wargeliyay inay soo xaadiraan fadhiga aan caadiga ahayn ee maanta.
Madaxweyne Farmaajo ayaa 28-kii bishii April sheegay in 1-da bisha May oo maanta ku beegan uu hortaggi doono Golaha Shacabka.
Madaxweynaha oo hadlayay ayaa yiri “Maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib tahay in aan isu dheelitiro heshiiska siyaasadeed ee horey loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyay ee Golaha shacabku meel mariyeen, waxaan maalinta Sabtida ah hortagayaa Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, si dalka dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay ku heshiiyeen Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.”
Maalin ka dib hadalka Madaxweynaha ka soo yeeray ayay Dowladda Mareykanka sheegtay inay si dhow u eegayso ballanqaadkii Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ee ku aaddanaa inuu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashooyinka dalka ee 17-kii September, isla-markaana uu si dhakhsi leh u bilaabi doono wadahadaladii ay dowladdiisu la laheyd Madaxda Dowlad Goboleedyada.
“Waxaan ka codsanaynaa Madaxweynaha iyo Baarlamaanka inay si deg-deg ah uga hawlgalaan baabi’inta hindise sharciyadeedkii muddo kordhinta ee 12-kii April.”
Dowladda Ingiriiska ayaa dhankeeda Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ugu baaqday inay si deg-deg ahi u wadahadlaan, iyadoo aanay wax shuruud ahi jirin.
“Waxaan ugu baaqaynaa Madaxweynaha iyo Hoggaamiye-yaasha Dowlad Goboleedyada inay deg-deg u wadahadlaan, iyadoo aan shuruudo lagu xirin. Waa inay yimaadaan ayaga oo diyaar u ah inay sameeyaan tanaasulaadka lagama maarmaanka ah, kuna wada xaajoodaan niyad sami.”
Previous articleMidowga Musharaxiinta oo Golaha Shacabka uga digay inay qaadaan tallaabo khaldan
Next articleDanjire Tarsan “Madaxweyne dhaxalkaga dagaal haku dambeysiin”